म हाकिम बन्दिन.::Independent News Portal from Nepal.
धेरै समय(१० बर्ष ) पछि एक स्कुले जिवनका घनिष्ट मित्र संग भेट भयो अनि चिया गफ गर्ने निधो गरियो अनि दुबै जना एउटा चिया पसलमा पस्यौँ । दुइ वटा चिया अडर गरियो अनि सुरु भयो चिया गफ ….. मैले फ्याट्ट भनिहाले हाकिम साहेबको के छ खबर ? बधाई छ है हाकिम भइहाल्यै अब त के चाहियो ?? बधाईका लागि धन्यबाद तर म हाकिम होइन कार्यालयको प्रमुख साचो(चाबी) मात्र हो चियाको एक सुर्को तान्दै उसले भन्यो । मलाइ अचम्म लाग्यो मुखैनिर लगेको चिया गिलास पनि चियाको सुर्को नतानि टेबलमा राखे अनि सोधे के भन्न खोजेको ??? उसले प्रष्ट्यायो…जसरी कुनै कोठामा राखेका हरेक कुराहरुको सुरक्षाका लागि हामी साचो लगाउछौ नि हो ठिक त्यस्तै गरी म पनि मेरो कार्यालयको साचो मात्रै हो । मैले मेरो कार्यालयका हरेक कुराहरुको पहरेदारी मात्र गर्छु । मैले उसका कुरा बुझिन आजकाल त तिमी कस्तो नबुझिने घुमाउरो कुरा गर्ने भएछौ सायद हाकिम भएर होला ? मेरो प्रश्नको उत्तर दिनै के लागेको थियो उसको फोनको घन्टी बज्यो एक छिन है भन्दै फोन रिसिभ गर्यो । फोनमा उसलाइ कसैले केहि कुरा सोध्दै थियो उसले म कार्यालयका साथीहरु संग सल्लाह गरेर हजुरलाइ भनौला भन्यो । उसको फोन बार्ता अझ लम्बिने संकेत भयो कार्यालय तर्फ पनि मोडियो फोन म चियाको सुर्कोमा रमाइ रहे मेरो चिया अनि उसको फोन बार्ता संगै सकियो । तिम्रो चिया नि ? सेलायो ठिकै छ एकै सुर्कोमा पियो अनि मेरो अघिल्लो प्रश्नको उत्तर दिने जमर्कोमा थियो उ तर मलाइ त्यो प्रश्नको उत्तर सुन्नु भन्दा पनि उसलाइ अर्को प्रश्न थप्न मन लाग्यो र थपिहाले अरु साथी संग सल्लाह गर्छु? हो म हरेक स-सानो कुरामा मेरा कर्मचारीहरुको सल्लाह /परामर्श लिन्छु कुनै बेला मेरा कार्यालय सहयोगीको पनि मलाइ सल्लाहको आवश्यक पर्छ । जसरी सागर मन्थन गरेर अमृत निस्कन्छ नि हो म पनि मेरा कर्मचारी मित्रहरुको मष्तिस्कमन्थन गरेर अमृत निकाल्छु अनि मात्र हरेक कुराको निर्णय लिन्छु । मेरो एक्लैको मष्तिस्क भन्दा त ६/७ जनाको मष्तिस्क बाट निस्किएका बिचार/सोचहरु बाट फिल्टर गरेर निस्किएको कुरा बढि उपयुक्त होला नि है ? उल्टै म तिर प्रश्न तेर्साउछ ।
अक्कनबक्क भए म यसै बिचमा उसले आफ्नो मोबाइल निकाल्यो र फोन गर्यो बहिनी कस्तो छ अहिले तिमीलाइ ?अझ रेस्ट गर्नु पर्ने त छैन ? उसो भए अझ दुइ दिन बिदामा बस्नु अनि पुर्णरुपमा ठिक भएर मात्र अफिस आउनु भन्दै फोन बार्ता बिसायो उसले म ट्वाल्ल परे ! कुनै कर्मचारी त काम गर्नको दुखले बाहाना बनाउने पनि हुन्छन नि मेरो प्रश्न नसकिदै उसले जवाफ दियो यदि साच्चिकै तिमिले भनेको जस्तै हो रहेछ भने पनि ठिकै छ नि त आश्चर्य मान्दै म ठिकै छ?? हो तिमिले भने जस्तै यदि साच्चिकै उसले बिरामीको बाहाना बनाएकै हो भने पनि अब कहिल्यै यसो गर्दैन। हेर जब तिम्रो आत्मा खुसी हुन्छ नि तिमीलाइ कहिल्यै यो गर त्यो गर भन्न पर्दैन तिम्रो आत्मै देखी मैले के गर्ने ? कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? आफै सोच आउछ । कहिले पनि म मेरा कर्मचारीलाइ यो गर त्यो गर भन्दिन बस कसरी गरिरहेका अवलोकन मात्र गर्छु । कुनै समस्या पो छ कि ? मैले कुनै कमि पो गरेको छु कि आफ्नो भन्दा उनिहरुको बढि चिन्तन गर्छु ।
हाकिम भनेको तिमीलाइ थाहा छ ? मेरो बिचार र उसको बिचार मिल्दैन भन्ने कुरा मैले अघिल्ला बार्तालाभ बाट बुझिसकेकी थिए अनि उसैको बिचारमा हाकिमको अर्थ बुझ्ने मनसाय बनाए अनि थाहा छैन भन्ने आशयमा मुन्टो हाल्लाए उसैको जवाफको प्रतिक्षा गरे सुन हा=हाइ प्रोफाइल, कि=किन सोच्ने अरुको बारेमा, म=मैले जसो भन्यो उस्तै हुनु पर्छ उसले यसरी शाब्दिक अर्थ लगायो र भन्यो हो त्यसैले भनेको म हाकिम होइन । उसले भन्दै गयो म सुनि रहे बिच बिचमा मेरा कुराले बोर भएको त छैनौ नि मेरो मनस्थिति पनि बुझ्यो उसले छैन छैन भन्दै ध्यानपुर्वक उसका कुरा सुनिरहे म त्यति बेला चियाको दोस्रो गिलास पनि रित्तिसकेको थियो । हरेक मान्छेसंग कुनै न कुनै ज्ञान सिप हुन्छ एउटै मान्छे संग सबै ज्ञान सिप नहुन पनि सक्छ म संग पनि सबैज्ञान सिप छैन हो तिनै ज्ञान सिप म अरु बाट लिन्छु।
अरु संग के कसरी किन परामर्श गरेर काम गर्नुको छुट्टै आनन्द छ । आफ्ना सोच / बिचार अरुमा लाद्नु भन्दा उनिहरुको सोच / बिचार बुझेर काम गर्दा आफ्नो दिमाग पनि धेरै खियाउनु नि नपर्ने अनि उनिहरुको अस्तित्व पनि रहने । जहिले पनि आत्मसम्मानको महसुस गराउनु पर्छ अरुलाइ काम कजाउने होइन आफै काममा कजिने बनाउन सक्नु पर्छ होइन मेरा तर्फ प्रश्न गर्छ उसको सोचमा सहमती जनाउदै मन्टो हल्लाउछु म । अरु टेबलमा कति मान्छे आए गए पसलेका हिसाब कति पुगे पत्तो भएन हामी भने घण्टौ सम्म एउटै टेबलमा थियौ चिया पसलेले घरि घरि हाम्रा तर्फ हेर्थ्यो मुसुक्क हास्थ्यो । हाम्रा गफ… अब त लाग्ने कि ?? मेरा कुरामा सहमति जनाउदै हुन्छ धेरै बेर बसियो उसले भन्यो । चियाको बिल भन्दा अमुल्य चिया गफ थियो मेरा लागि उसले त हुन्न हुन्न भन्दै थियो जबर जस्ती मैले नै चियाको बिल तिरे अनि दुबै जना उक्त चिया पसल बाट बाहिरियौँ ।
प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन १४, २०७६ , ५:१४ बजे
खुल्ला सिमा भारतका लागि पनि उत्तिकै समस्या छ: उपाध्याय